Ụzọ ngwa ngwa ịchọta isiokwu vidiyo iji kwalite SEO SEO - YTpals
Ụzọ ngwa ngwa ịchọta isiokwu vidiyo iji kwalite YouTube SEO
YouTube bụ otu n'ime netwọkụ mgbasa ozi ọha kachasị ewu ewu yana ikpo okwu na-eduga maka mgbasa ozi vidiyo n'ụwa niile. Na gburugburu Onu ogugu 2.29 kwa oru ndi ozo, YouTube bụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze nke abụọ na-ewu ewu na-esote Facebook. Ikpo okwu a na-enye ọtụtụ ohere maka ndị okike igosipụta ọdịnaya ha, yana enwere ike iji ya maka ire ahịa ika. Ihe kachasị mkpa maka ndị mmadụ n'otu n'otu na azụmahịa bụ ịbịarute ọtụtụ ndị na-ekiri ha ka ha nwere ike ma mee ka ndị na-ege ntị dịkwuo elu. Dị iche iche YouTube SEO enwere ike iji usoro iji chọta mkpụrụokwu dabara adaba iji ruo ndị na-ege ntị. Edemede a ga-enyocha ka esi eji isi okwu na YouTube na ụzọ kachasị mma isi nyocha isi okwu.
Keywords vidiyo YouTube na-ezo aka kpọmkwem mkpụrụokwu ma ọ bụ akpaokwu a na-ahụkarị na aha na nkọwa nke vidiyo ị na-ebipụta. Algọridim YouTube na-eji mkpụrụokwu ndị a chọpụta ihe vidiyo a na-achọ ịkwado maka ọchụchọ ndị dị mkpa. Keywords nwere ike ịbụ otu mkpụrụokwu ma ọ bụ nkebiokwu ọtụtụ okwu. Agbanyeghị, a na-amakarị mkpụrụ okwu ogologo ọdụ ka ọ na-enye ọnụego ntụgharị ka mma karịa otu mkpụrụokwu ma ọ bụ mkpụrụokwu dị mkpụmkpụ.
Iji mkpụrụokwu ndị dị mkpa maka vidiyo nwere ike ịbawanye ohere nke igosipụta elu na nsonaazụ ọchụchọ, yabụ video isiokwu nyocha dị mkpa. Ị ga-ahụ okwu na nkebiokwu ndị mmadụ na-ejikarị achọ vidiyo n'ịntanetị site na nyocha. N'ịtụle na YouTube bụ otu n'ime igwe nchọ vidiyo a na-ejikarị, ohere nke ndị na-ege gị ntị na-achọ vidiyo gị dị elu nke ukwuu. Ọtụtụ nde mmadụ na-eji YouTube kwa ụbọchị iji chọọ etemeete, egwuregwu, azụmahịa na ihe ndị ọzọ. Ihe niile ị ga - eme bụ iji mkpụrụokwu vidiyo ziri ezi iji banye n'ahịa ahụ wee welie visibiliti nke vidiyo gị.
Otu esi achọta mkpụrụokwu vidiyo YouTube
Ịhọrọ mkpụrụokwu vidiyo ziri ezi nke ndị na-ekiri na-eji mgbe ha na-achọ ọdịnaya nwere ike ime ka ọhụhụ nke ọdịnaya gị dịkwuo elu. Ọtụtụ usoro YouTube SEO nwere ike inyere gị aka ịmata isiokwu vidiyo ndị a maka ịkwalite vidiyo. Ka anyị leba anya n'ụzọ ụfọdụ ị nwere ike isi chọọ mkpụrụokwu vidiyo.
1. YouTube Auto Complete Feature
Mgbe ndị ọrụ na-achọ ihe na YouTube, igbe ọchụchọ na-egosikarị mkpụrụokwu akọwapụtara, nke a maara dị ka YouTube Autocomplete. Njirimara YouTube Autocomplete na-agwa ndị ọrụ naanị mkpụrụokwu vidiyo kacha ewu ewu, nke pụtara na ha bụ nhọrọ isiokwu zuru oke maka ịkwalite ọdịnaya vidiyo gị. Ị nwere ike tinye ha na aha vidiyo ma ọ bụ nkọwa wee nweta mmasị, nkọwa na ndị debanyere aha maka ọwa gị. Uru kachasị mkpa nke mkpụrụokwu ndị a chọpụtara site na YouTube Autocomplete bụ na ọ ga-adị mfe ịhazi ọkwa. Ọtụtụ n'ime aro ndị dị na Autocomplete nwere mkpụrụokwu ọdụ ogologo, nke mere na ha anaghị asọmpi.
2. Top Videos nke asọmpi
Ụzọ ọzọ dị mma isi chọta isiokwu vidiyo bụ site na vidiyo ndị na-arụ ọrụ nke ọma nke ndị asọmpi. Ebe ọ bụ na mkpụrụokwu ndị a egosipụtalarị dị irè maka ndị asọmpi, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya itinye ha na vidiyo gị. Iji mata mkpụrụokwu n'ụzọ dị otu a, nzọụkwụ mbụ bụ ịchọta ọwa YouTube ndị asọmpi gbasara nha ọwa gị. Na ngalaba vidiyo, hazie vidiyo ha site na nke kacha ewu ewu wee họrọ mkpụrụokwu site na aha vidiyo na nkọwa ha. Nke a ga-abụ usoro na-enye aka ma ọ bụrụ na ị na-amalite site na ọkọ.
3. Video mkpado na asọmpi si website
Ụzọ ka mma iji chọọ mkpụrụokwu na weebụsaịtị ndị asọmpi bụ site na ilele mkpado vidiyo. A naghị egosikarị mkpado vidiyo n'ihu ọha. Agbanyeghị, ị nwere ike gwupụta mkpado ndị ahụ site na ịga na koodu HTML ibe weebụ. N'ihi na usoro a, ị nwere ike na-aga na video peeji nke na-ahọrọ "ele page isi iyi" si ala dobe menu mgbe nri-pịa. A ga-egosi gị koodu HTML, ma ị nwere ike jiri nhọrọ ọchụchọ (Command+F na CTRL+F) chọọ nkebi ahịrịokwu "isi okwu" na koodu. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ kpọmkwem mkpado YouTube ji maka video.
Site n'iji ụzọ ndị a dị mfe, ị ga-ahụ isiokwu vidiyo n'oge na-adịghị anya ma kwalite ọdịnaya gị ka ọ pụta ìhè na nsonaazụ ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ezubere iche, ị nwere ike zụta ọrụ adịchaghị nke YouTube Video SEO nyere site na YTpals. Site na ọrụ a, ndị ọkachamara anyị ga-enye gị nyocha vidiyo zuru oke, ndị ga-enyekwa gị aha na nkọwa SEO-enyi na enyi. A ga-enyekwara gị mkpụrụokwu ise ma ọ bụ hashtags, nke emechara nyocha nke ọma. Nke a abụghị ihe niile. YTpals na-enye ọtụtụ ọrụ YouTube ndị ọzọ dị ka Nlele YouTube n'efu, Mmasị, na ndị debanyere aha, nke enwere ike iji tinye ọwa gị n'ụzọ nke ịga nke ọma. Ka ịmatakwu gbasara ọrụ YTpals na-enye, kpọtụrụ anyị taa!
Ụzọ ngwa ngwa ịchọta isiokwu vidiyo iji kwalite YouTube SEO nke ndi edemede YTpals, 2 February 2022
Etu esi bulie ogo nke vidiyo YouTube gị?
Taa, mgbe ọ bụla ị na-eche maka ịnweta nkuzi ngwa ngwa, dị mfe ịgbaso, na nkuzi na-enye ihe ọmụma, ihe mbụ na-abata n'uche bụ YouTube, ọ bụghị ya? Nke ahụ bụ ikekwe ihe kpatara ijeri mmadụ abụọ ji banye na ikpo okwu vidiyo…
Iji ihe ịma aka YouTube na-abawanye ọnụ ọgụgụ ndị na-ekiri gị na ndị debanyere aha gị
Cheta ihe ịma aka ịwụ ice na otu o siri gaa na mgbasa ozi ọha? Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ọmụmaatụ vidiyo dabere na ịma aka na-aga nke ọma nke kpalitere ebili mmiri n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Vidiyo ịma aka pụtakwara ka…
Ndụmọdụ 5 ị ga-agbaso ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka vidiyo YouTube gị pụta na ọchụchọ Google
A na-atụ anya na ebe ọrụ YouTube nwere Google ga-eru nde 210 na 2022. Ọtụtụ n'ime ya bụ n'ihi nnukwu ntụrụndụ na ike ịre ahịa nke vidiyo YouTube. YouTube bụkwa netwọkụ mmekọrịta nke abụọ ama ama…